दशैमा कस्तो खाना खाने र के नखाने ? – BRTNepal
दशैमा कस्तो खाना खाने र के नखाने ?
बिआरटीनेपाल २०७६ असोज १४ गते २१:१८ मा प्रकाशित
हिन्दू धर्मावलम्बीको महान् चाड दसैंं घर–आँगनमा भित्रिएको छ । कतिपयले दसैंलाई ‘मासु खाने’ पर्वका रूपमा पनि लिन्छन् । दसैं र मासु परिपूरकजस्तै भइसकेका छन् । घाँटी हेरी हाड निल्नुपर्छ भनेझैं दसैंका नाममा अत्यधिक खर्च गर्नु राम्रो हुँदैन । आफूसँग जे छ, त्यसैमा सन्तुष्ट भएर दसैं मनाउनुपर्छ । अहिले त देश–विदेशबाट आफन्तसमेत घर फर्किएका छन् ।
चाडपर्वको नाममा मासु धेरै खाने चलन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ । मोटो शरीर, रगतमा कोलेस्ट्रोल बढी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, युरिक एसिड तथा मधुमेह भएका व्यक्तिले सकभर मासु नखानु नै राम्रो हुन्छ । शरीरलाई पच्ने गरी खाना खानुपर्ने पोषणविद् डा. अरुणा उप्रेती बताउँनुहुन्छ । उहाँका अनुसार खाना खानुअघि स्न्याक्स खाने चलन छ । यसले शरीरलाई असर गर्छ । बरु अलिक बढी खाएको जस्तो लाग्यो भने एक छाक नखाँदा पनि हुन्छ । बालबालिकालाई पनि खुवाउँदा विशेष ख्याल गर्नुपर्छ ।
दसैंमा मादक पदार्थ सेवन सकेसम्म नगर्न डा. उप्रेतीको सुझाव छ । ‘दसैं स्वभावैले खानपानसँग जोडिएको पर्व हो,’ उहाँ भन्नुहुन्छ , ‘तर, दीर्घरोगीले यो पर्वमा अलि बढी ध्यान दिन जरुरी छ र स्वस्थ मानिसले पनि स्वास्थ्यको ख्याल गर्दै मसलेदार, चिल्लो तथा पिरो खानेकुरा खाँदा ध्यान पुरेयाउनुपर्छ ।’
दीर्घरोगले खानपिनमा ध्यान नदिँदा चाडपर्वको बेलामा अस्पतालमा भर्ना भएर बस्नुपरेका उदाहरण थुप्रै छन् । त्यसकारण, चिकित्सकहरूले दसैंमा सबैलाई खानपिनमा विशेष ध्यान दिन आग्रह गरिरहेका हुन्छन् । चिकित्सकका अनुसार खानपिनमा सामान्य ध्यान नदिँदा दसैंको समयमा उच्च रक्तचाप, मुटु, मधुमेह र पेटजन्य समस्या भएका बिरामीको संख्या ह्वात्तै बढ्छ । रातो मासु, छाला वा त्यसमा हुने बोसोले नसर्ने खालका रोग त बढाइरहेकै हुन्छ भने प्रत्यक्ष सम्बन्धित जनावरमा रहेको रोगसमेत सर्ने सम्भावना उत्तिकै रहेको चिकित्सक बताउँछन् ।
चिकित्सकका अनुसार दसैंको समयमा बजारमा पाइने अस्वस्थकर मासुका कारण तत्कालै टाइफाइड, झाडापखाला, क्षयरोग, आउँ, पेट फुल्ने, मिर्गौलामा समस्या देखिने, क्ओसटियल इन्फेक्सन, फुड पोइजनिङलगायतका समस्या देखिन्छ । मासुले स्वास्थ्यलाई फाइदा पुर्याउछ । तर, मासु खाने बेलामा ध्यान दिइएन भने त्यसले थप समस्या निम्त्याउँछ । मोटो शरीर, रगतमा कोलेस्ट्रोल बढी, उच्च रक्तचाप, मधुमेह, युरिक एसिड भएका व्यक्तिले सकभर मासु नखानु नै राम्रो हुन्छ ।
मुटुरोगका चिकित्सकका अनुसार नेपालीको भान्छामा पाक्ने खाने कुरा सामान्य चाडबाडमा मात्र नभई अन्य समयमा पनि मुटुका लागि उपयुक्त हुँदैन । अझ दसैंको समयमा मुटुरोगी तथा उच्च रक्तचापका बिरामीलाई सोझै असर गर्ने रातो मासुका परिकार हुन्छन् । सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुनका अनुसार कम चिल्लो मिसिएको खाना खाँदा शरीरलाई फाइदा गर्छ । डा. पुनले भन्नुभयो, ‘दसैंमा चिल्लो बढी खाने चलन छ । अलिक कम चिल्लो हालेको ताजा खानेकुरा खाँदा शरीर
दसैंको बहानामा धेरै धूमपान र मद्यपान नगर्दा नै बेस हुन्छ । धूमपानले मुटु र फोक्सोलाई हानि गर्छ । मद्यपानले मुटुरोगको खतरा बढाउँछ । झन् रोगी त धूमपानबाट टाढै बस्दा राम्रो हुन्छ । दसैं हो भनेर जथाभावी मद्यपान गर्दा सुगर र प्रेसरको समस्या बढ्न सक्छ । मुटुरोगीलाई पनि यसले फाइदा गर्दैन । चिकित्सकका अनुसार रक्सी सेवनले रगतमा ट्राइग्लिसेराइडको मात्रा बढाउँछ । जसले मुटुरोग, हृदयाघात र पक्षाघात गराउनमा विशेषभूमिका खेल्छ ।
रक्सी भनेको कार्बोहाइट्रेड हो त्यसैले शरीरको वजन बढाउन तथा रगतमा सुगरको मात्रा उच्च राख्न पनि यसको विशेष भूमिका हुन्छ । वाइन, बियर, जिन, लोकल, छ्याङ आदि रक्सीका प्रकारअन्तर्गत पर्छन् ।
दसैंमा खानाको मात्रा सबैका लागि एकनास भने हुँदैन । धेरै शारीरिक काम गर्नेले धेरै खानुपर्छ, थोरै काम गर्नेले थोरै खानुपर्छ ।
चिकित्सकका टिप्स के छन् त?
धेरै मसलादार, चिल्लो र चिनीको मात्रा धेरै भएको खानेकुरा खानुहुँदैन ।
मासुजन्य खाना कम गर्नुपर्छ र दुग्धजन्य परिकारको सेवनमा जोड दिनुपर्छ । खाना खाएको केही समयपछि तातोपानी सेवन गर्नुपर्छ ।
रातो मासु धेरैको रोजाइमा पर्छ । तर, सेतो मासुमा बढी जोड दिनुपर्छ । रातो मासुले मधुमेह, पेट तथा आन्द्रामा क्यान्सर लाग्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
बिहान व्यायाम गर्नुपर्छ । घरमै बसिरहनुहुँदैन ।
मासुका पारखीले सकेसम्म कुखुरा र माछा खाँदा उपयुक्त हुन्छ । हरियो सागपात र फलफूललगायतका खानेकुरामा बढी ध्यान दिनुपर्छ ।